प्रचण्डलाई नेकपाको जिम्मा दिन माधवकुमार राजी हुन्छन् ? Canada Nepal
प्रचण्डलाई नेकपाको जिम्मा दिन माधवकुमार राजी हुन्छन् ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र पार्टी र सरकारको नेतृत्वको विषयलाई विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाभित्रको विवादले मुलुकलाई नै प्रभाव पार्ने भएकाले चासोका साथ हेरिएको छ । दुई तिहाइ बहुमत नजिक मत ल्याएर सरकार चलाएको नेकपामा गत फागुनदेखि सतहमै आएर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ । उनलाई सरकार र पार्टी नेतृत्वबाट हटाउन गत फागुन यता आफ्नै पार्टीका नेताहरुले विभिन्न चलखेल गर्दै आएका छन् ।
ओलीलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउन सक्रिय रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले संघीय संसदका सदस्य नै नरहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको तयारी नै गरेका थिए । यसरी विकसित नेकपाभित्रको राजनीतिले कोरोनाको महामारी र भारतसँग राष्ट्रियताका लागि मुलुक लडिरहेका बेला नेताहरुले ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।
यही असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्ड, नेपाल, खनालसहितका सदस्यहरुले ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । तत्कालीन एमालेको नेतृत्वका गरेका नेपाल र खनालले पनि ओलीको राजीनामा मागेका हुन् ।
डेढ दशक लामो एमालेको नेतृत्व गरेर २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो पराजय व्यहोरेपछि नेता नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । खनालले पनि एमालेको नेतृत्व लिइसकेका छन् । प्रचण्डले पनि तीन दशकभन्दा बढी माओवादीको नेतृत्व लिएका थिए । अहिले पनि नेकपाको नेतृत्वमा प्रचण्ड छन् ।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिन ओलीलाई दबाब दिने नेता नेपालले अब प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्न चाहेका हुन् भन्ने कार्यकर्ताहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भए पनि अहिले पनि विभिन्न गुट र धार शीर्ष तहमा देखिए पनि नेकपाभित्र कार्यकर्तामा भने एमाले र माओवादी धार रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री र पार्टीमा शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न दौडमा रहेका तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्दै नेता नेपालले उनलाई साथ दिएका हुन् या अन्य कुनै शर्त छन् यसबारे दुवै पक्षले केही खुलाएका छैनन् ।जनता कोरोनाको महामारीका कारण गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका बेला नेकपामा भइरहेका राजनीतिक चलखेलले निराशा छाएको छ । बिहीबारबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
आषाढ १९, २०७७ शुक्रवार ०४:११:०० बजे : प्रकाशित